MAZUVA: Kurisa Imba Yako kana Yekumhara Peji neaya manomwe Zvidimbu Zvemukati | Martech Zone
Kwemakore gumi apfuura, tanyatsoona vashanyi pamawebhusaiti vachiita zvakasiyana. Makore apfuura, takavaka masayiti akanyorwa zvigadzirwa, maficha, neruzivo rwekambani… zvese izvi zvaive zvakanangana nemakambani akaita.
Zvino, vatengi nemabhizinesi zvakafanana vari kumhara pamapeji epamba uye mapeji ekumhara kuti vatsvage kwavo kwavanotevera kutenga. Asi ivo havasi kutsvaga runyorwa rweako maficha kana masevhisi, ivo vari kutsvaga kuti vaone kuti unonzwisisa kwavari uye kuti ndiwe shamwari chaiyo yekuita naye bhizinesi.
Kwemakore gumi ikozvino, ndanga ndichimanikidza makambani kuti atengese avo mabhenefiti pamusoro pehunhu hwavo. Asi ikozvino, imba ine mwero kana peji rekumhara rinonyatsoda zvikamu zvidimbu zvinomwe zvemukati kuti zvikure:
Dambudziko - Tsanangura dambudziko rine tarisiro yako uye yaunogadzirisa kune vatengi (asi usazotaura nezvekambani yako… zvakadaro).
Uchapupu - Ipa inotsigira manhamba kana an indasitiri mutungamiri quote iyo inopa nyaradzo kuti inyaya yakajairika nyaya. Shandisa kwekutanga kutsvagisa, kutsvagisa kwechipiri, kana munhu wechitatu anovimbwa.
Resolution - Ipa ruzivo pamusoro pevanhu, maitiro, uye mapuratifomu ari kubatsira kurerutsa dambudziko. Zvekare, apa hapasi paunopindira kambani yako… iwo mukana wekupa ruzivo rwunoitwa nemaindasitiri, kana nzira dzaunoshandisa dzinozivikanwa.
ziviso - Zivisa kambani yako, chigadzirwa, kana sevhisi. Ichi chingori chirevo chishoma chekuvhura musuwo.
tsananguro - Ipa muongororwo wemhinduro yako, uchidzokorora kuti inogadzirisa sei dambudziko rakatsanangurwa.
Kusiyanisa - Jekesa kuti sei vatengi vangade kutenga kubva kwauri. Iyi inogona kuve yako mhinduro nyowani, ruzivo rwako, kana kunyangwe kubudirira kwekambani yako.
Zviratidzo zveNzanga - Ipa humbowo, mibairo, zvitupa, kana vatengi zvinopa humbowo hwekuti iwe ita izvo zvaunoti unoita. Izvi zvinogona zvakare kuve zvipupuriro (sanganisira pikicha kana logo).
Ngatitsanangurei kune akati wandei emimwe mienzaniso. Zvichida iwe uri Salesforce uye uri kunanga makambani emabasa emari:
Makambani emabasa emari ari kunetsekana nekuvaka hukama muzera redhijitari.
Muchokwadi, mune chidzidzo kubva kuPWC, 46% yevatengi havashandise matavi kana kufona nzvimbo, kubva kubva ku27% makore mana apfuura.
Makambani emabasa emari anofanirwa kuvimba nehunyanzvi, omni-chiteshi nzira dzekutaurirana kuti dzipe kukosha uye kugadzirisa hukama nevavanotarisira uye vatengi.
Salesforce ndiye anotungamira Kushambadzira Stack mupi kune indasitiri yemabasa emari.
Nesanganiswa isina musono pakati peCRM yavo, uye nerwendo rwemberi rwekugona pamwe nehungwaru muMarketing Cloud, Salesforce iri kubatsira makambani ezve tekinoroji emari kubvarura iro dhijitari.
Salesforce inozivikanwa naGartner, Forrester nevamwe vaongorori senzvimbo inozivikanwa kwazvo uye inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri. Ivo vanoshanda neakakura uye akaomesesa masangano emari senge Bank of America, nezvimwewo, nezvimwe.
Mapeji epakati, hongu, anogona kuenda mune zvakadzama zvakadzama. Iwe unogona (uye unofanirwa) kuwedzera izvi zvirimo nemifananidzo, mifananidzo, uye vhidhiyo. Zvakare, iwe unofanirwa kupa nzira kune mumwe mushanyi kuchera zvakadzika.
Kana iwe ukapa izvi zvidimbu zve7 zvemukati pane yega peji resaiti yako yakanangana nekutyaira mushanyi kuita chiito, iwe unonyatso kuve unobudirira. Kuputsa uku kunobatsira vashanyi kuti vanzwisise kuti ungavabatsira sei uye kana kuti iwe unogona kuvimbika. Inovatsika-tsika kuburikidza nesarudzo yavo yekuita sarudzo.
Uye inosanganisira zvirimo zvinodikanwa kuvaka kuvimba uye kusimbisa chiremera chako. Kuvimba nechiremera zvinogara zviri zvipingamupinyi zvakakosha kune mushanyi kutora matanho.
Iye zvino zvawakanyatsofamba nemushanyi wako nenzira iyi, vazivise kuti danho rinotevera nderei. Inogona kunge iri yekuwedzera kungoro kana chiri chigadzirwa, ronga demo kana iri software, dhawunirodha zvimwe zvemukati, tarisa vhidhiyo, taura nemumiriri kuburikidza nehurukuro, kana fomu kukumbira rwakawedzerwa ruzivo.
Zvimwe zvingasarudzwa zvinogona kutobatsira, zvichigonesa vashanyi vanoshuva kutsvagisisa kuti vachere zvakadzika kana avo vakagadzirira kutaura kune vatengesi kuti vasvike pakubatsirwa.
Tags: kutendeuka optimizationnzira yekutendeukakumhara kushandurwa kwemapejikumhara peji optimization
Kuwanika: A Guest Post Musika